पढेको कुरा छिट्टै बिर्सने बानी छ ? त्यसो भए यसो गर्नुहोस् ! - nayakhoj24.com
प्रकाशित मिती July 17, 2017 | nayakhoj24 admin
काठमाडौँ, साउन : धेरैको पढेको विर्सने बानी हुन्छ । यो समस्याले धेरैलाई सताईरहेको हुन्छ । पढेको कुरा एकछिनमा बिर्सने समस्याका कारण धेरै मेहेनत गर्ने विद्यार्थी पनि असफल भएका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । आखिर पढेको कुरा कसरी सम्झने त ? नेपालमा शैक्षिक क्षेत्रमा लामो समय काम गर्नुभएका र मनोबैज्ञानिकहरुको सहयोगमा हामीले तपाईंहरुलाई ७ टिप्स संकलन गरेका छौं ।